Dowlada Soomaaliya oo ka hadashay xayiraadii wafdigii R/Wasaaraha ee garoonka JKIA – STAR FM SOMALIA
Qoraal ka soo baxay dowlada federalka Soomaaliya ayaa loogaga hadlay dhacdadii loogu xayiray xildhibaano ka mid ah Baarlamaanka Soomaaliya oo ku sii jeeday dalka Turkiga garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta International Airport(JKIA).
Qoraalkan ayaa lagu sheegay in dowlada ay aad uga xuntahay arrintii ka dhacday garoonka diyaaradaha JFKI taasoo qaar kaid ah wafdiga oo ahaa xildhibaano ay kala kulmeen xayiraad garoonka.
“Xafiiska Ra’iisal wasaaraha ayaa xaqiijiyay in wafdiga Ra’uusal wasaaraha iyo wasiiradii la socday aysan qeyb ahayn xubnihii la xayiray lana geeyay qeybta soo dhoweynta ee VIP Pavilion, ra’iisal wasaarahana waxaa uu go’aansaday inuu sugo xildhibaanada la xayiray.”ayaa lagu yiri qoraalkan.
Qoraalkan ayaa lagu sheegay in uu jirey heshiis ka dhexeeyay dowlada Kenya iyo dowlada Soomaaliya taasoo ah in madaxda dowlada Federalka aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin baaritaanada ay maraan diyaaradaha magaalada Wajeer.
Dowlada Federalka waxay cabasho rasmi ah u gudbisay maamulka garoonka JKIA waxayna ka sugeysaa in ay raali gelin rasmi ah ka bixiyaan dhacdadii ka dhacday garoonka.